Git Sangit News » हस्तमैथुन स्वास्थको लागि कति लाभदायक ? जानिराखौ,
हस्तमैथुन स्वास्थको लागि कति लाभदायक ? जानिराखौ,
प्रायः डिप्रेसनका कारण तनाव र निराशा हुन्छ । तर, जब तपाईं स्वयमलाई राम्रो महसुस गराउन चाहनु हुन्छ भने त्यसले तपाईंलाई डिप्रेसनबाट बचाउँछ । शहरका प्रायः मानिसहरु एक्लोपनका कारण डिप्रेसनको शिकार हुन्छन् । त्यस्तो स्थितिमा आफू स्वयंसँग बिताएको त्यो क्वालिटी समयले तपाईंलाई डिप्रेसनबाट बचाउँछ ।
इम्युनिटी बढाउँछ हस्तमैथुनले तपाईंको इम्युन सिस्टमलाई पनि बलियो बनाउँछ भन्ने दाबी अधिकांश स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारहरुको रहेको छ ।
प्रकाशित मिति २३ पुष २०७६, बुधबार १०:३०